वैदेशिक रोजगारी देखी स्वरोजगारी सम्मको एक यात्रा
बैङ्गलोरको पढाइ पछि कमल राज सिङ्गताङ्गले एक कम्पनीको योजना व्यवस्थापकको रुपमा सिङ्गापुर, साउदि अरेविया, मोरोक्को, टर्की, कतार र फ्रान्स लगाएतका देशहरुमा काम गर्न मौका पाउनु भयो । यसैगरि उहाँका काका—चन्द्र तामाङले पनि २० वर्ष जति भारतमा नै काम ग
मोरिंगा के हो ? मानव शरिरलाई आवश्यक पर्ने ९० भन्दा बढि किसिमको पोषण तत्व र ४६ किसीमका एन्टी अक्सिडेन्ट पाइने ,तराई तथा मध्य पहाडमा लिची र आँप हुने ठाउँमा सजिलै लगाउन सकिने र छिटो बाली लिन सकिने यो खाद्य पदार्थ ,औषधी ,रंग ,घाँस तथा पानी शुद्धिकरणमा प्
परिचयहरियो घाँस नेपियर, मकैको ढोड, कोदोको हरियो नल, स्थानीय खर, टियोसेन्टे, सोरगम, वजरा, आदि घाँसहरूलाई शीत ओभाई सकेपछि काटेर छुट्टाछुट्टै वा मिसाई वढिमा एक अंगुलको वा ३ से मी टुक्रा को घाँसहरूलाई प्लाष्टिकको थैलोमा भरी सफा खुट्टाले थिचेर थैलाको हावा
यसरी गराैँ कुखुरा पालन (सम्पुर्ण प्रकृया सहित)
विमल खतिवडा, कान्तिपुर पत्रिका
व्यावसायिक कुखुरापालनमा लाग्ने सोच आयो भने पहिला कुन जातको र कस्तो ठाउँमा पाल्ने भन्ने निधो गर्नुपर्छ । यसका लागि विज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तिहरूसँग परामर्श लिन सकिन्छ । कति लगानी गर्ने हो, त्यहीअनुसार योजना बनाउनुपर्छ । आवश्यकताअनुसार ह्याचरी तथा दाना उ
बोटबिरुवाको सामान्य बिकास प्रक्रियाको लागि आवश्यक बाताबरणलाइ प्रतिकुल मौसममा पनि प्लास्टिक घरको सहयोगमा अनुकुल बनाई उनीहरुको बिकास र उत्पादन बृद्दी गर्ने प्रक्रिया र प्रविधि नै प्लास्टिक घर खेति पद्दति हो । नेपालमा प्लास्टिक घर भित्र बेमौसम
व्यवसायिक लौका खेतिः
तरकारी खाइने, तुम्बाका जातको लामो र डोलो लहरे फल तरकारीलाई लौका भनिन्छ । अंग्रेजीमा यसलाई बोटल गार्ड भनिन्छ । शरिर तन्दरुस्त राख्न नभै नहुने कार्बोहाइड्रेट र प्रटिन यसमा प्रशस्त पाइन्छ । दिसा गोटा पर्ने रोगको उपचारको लागि यसले मदत गर्छ भने यसक
माछा पालन (Fish Farming)
माछापालनको महत्व माछा पूर्णरूपमा पानीमा बस्ने जीव हो । माछा स्वच्छ पानी तथा समुद्रको नुनिलो पानीमा पनि पाइन्छन् । स्वच्छ पानीमा पाइने केही माछाहरूलाई व्यावसायिक रूपमा खेती पनि गरिन्छ । माछा पोषणको रूपमा प्रयोग गरिने प्रोटिनको एक प्रमुख स्रोत हो । माछ
हाँस पालन (Duck Farming)
हाँसहरू फुल तथा मासुको लागि पालिन्छन् । नेपालमा प्रायः तराई क्षेत्रमा थारू तथा अन्य समुदायले आफ्नो घरायसी प्रयोजनका लागि थोरबहुत मात्रामा गर्दछन्, व्यावसायिक रूपमा हाँसपालन गरेको पाइन्न । कतिपय धार्मिक कार्यकालागि हाँस र हाँसको फुल नै चाहिन्छ । हाँस
१.१ व्यावसायिक बाख्रापालनको आवश्यकता नेपालका अधिकांश परिवारहरूको जीविकोपार्जनको आधार नै कृषि भएकोले कृषकहरू खेतीपातीसँगै पशुपालन पनि गर्दैआएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा पारिवारिक आयआर्जनको प्रमुख स्रोतको रूपमा पशुपालनलाई मानिन्छ । पशुपालन व्यवसायले दे
तालिममा सिकाईने विषय वस्तुहरु: -मौरी घारहरू राख्ने ठाउँको १–१.५ कि.मी. वरिपरि मौरी चरन बाली-बिरूवा फैलिएको क्षेत्र, फूल फुल्ने प्रयाप्त अवधि, पानीको श्रोत भएको र विषादीको प्रयोग नहुने क्षेत्र हुनु जरूरी छ । मौरी क्षेत्र वरिपरि सकेसम्म चरन सालभ
बङ्गुर पालन (Pig Farming)
1. व्यावसायिक बङ्गुरपालनको आवश्यकता? बङ्गुरको मासुलाई पोर्क भनिन्छ । विश्व खाद्य संगठनका अनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी बङ्गुरको मासु उत्पादन तथा खपत हुने गर्दछ । हाल विश्वमा कुल ३० करोड मेट्रिक टन मासु उत्पादन (बङ्गुर, खसी, भेडा, गाई, भैंसी, कुखुरा आदि
टर्कि पालन ( Turkey Farming)
टर्किपालन परिचयः मासुको लागि टर्किपालन व्यवसाय निजी स्तरमा सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिन्छ । टर्किको वैज्ञानिक नाउँ मेलिग्रीस ग्यालोपाभा हो । टर्किलाई गरम तथा ठण्डा हावापानीमा पनि पाल्न सकिन्छ । टर्किलाई प्रायः मासुको लागि पालिन्छ तर यिनीहरू ढिलो बढन
परिचय: नेपालमा हाल मासु र अन्डाको लागि बट्टाइपालन व्यवसाय निजीस्तरमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निकै लोकप्रिय हुँदै गएको छ । बट्टाइको वैज्ञानिक नाउँ Coturnix japonica हो । नेपालमा बट्टाइपालनको आरम्भ बालकोट, भक्तपुरबाट भएको मानिन्छ । नेपालमा फोहोर, ब्रिटिस
# हावापानी :- कागती खेती का लागि ७५० देखी १४०० मिटर सम्म उचाइ भएको क्षेत्र उत्तम हुन्छ भने यस्का लागि तापक्रम ५ देखी ३५ डि.सेन्टिग्रेड र वार्षिक बर्षा १००० देखी २००० मि मि सम्म उपयुक्त हुन्छ। कागती ले केही हद सम्म सुख्खा सहन् गर्न सक्छ तर तुसारो सहन
पृष्ठभुमी : परापूर्वकाल देखी नै अरु खाले पशुपंक्षी झै खरायो प्रजाती मानवीय सभ्यताको अभिन्न अंगको रुपमा रही आएको मानिन्छ । रोमनहरुले यस प्रजातीलाई मनोरंजनका लागी प्रयोग गर्न जंगली खरायो समाती घरपालुवा बनाएको तथ्य भेटिन्छ । त्यहाँ बाट यस प्रजातीको जनस
भैसीलाई जनावर मध्ये सवैभन्दा उन्नत र राम्रो मानिन्छ । जनावरमध्ये ५३ प्रतिशत योगदान भैसीको छ । नेपालमा कूल १७ लाख मेट्रिक टन दूध भैसीले मात्रै दिन्छ । यो मात्रा भनेको कूल दूध उत्पादनको ७० प्रतिशत हुन आउछ । त्यस्तै मासू मात्रै तीन लाख मेट्रिक टन भैसीको
निर्वाहका लागि पालिने गाईलाई आम्दानीको स्रोत बनाउन थालेपछि अहिले युवाहरु पनि आकर्षित हुन थालेका छन् । तर गाई पालन गर्नुअघि आहारा, स्वास्थ्य तथा गोठ व्यबस्थापनका बिषयमा ध्यान दिनुपर्छ । नजानीकन लाग्दा फस्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । सामान्यतया व्
परिचयः अरुण–४ मकैको जात बि.सं.२०७१ सालमा तराई, भित्री मधेश र पहाडको बेशी तथा टार क्षेत्रको लागि सिफारिश गर्न लागिएको छ । यसको पैतृक स्रोत exotic and local landraces को समिश्रण हो । यो जात जाडो तथा गर्मी हावापानीमा राम्रो हुने भएकोले सोहि अनुसा
बदाम जसलाई मुम्फली को रुप मा पनि चिन्ने गरिन्छ , संसार को एक महोत्वपूर्ण बालि हो | मुख्यता यो बालि tropics र subtropics मा प्रचलित पाइन्छ | दुवै ठुला र साना उत्पादक क लागि उत्तिकै फलदायी यो बालि अहिले निकै नै प्रचलित पाइन्छ | यसलाई दुवै कोसे बालि र त
परिचय मसलाको राजा भनेर चिनिने मरिच एक बहुबर्षे, सदाबहार, लहरे झाड हुने वाली हो । यसको बोट लहरे झाङ हुने भएकाले यसलाई सहाराको आवश्यकता पर्छ । यसको वानस्पतिक नाम पाइपर निग्रम(Piper nigrum) हो जुन पिपरेसी (piperaceae) परिवार अन्तर्गत वनस्पति जगतमा पर्छ
मेवा तराई तथा मध्य पहाडमा उत्पादन गर्न सकिने एक महत्वपूर्ण फल हो । क्यारिकेसी (caricaceae) समूहमा पर्ने यो फल पौष्टिक दृष्टीले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । मेवा “भिटामिन ए” को महत्वपूर्ण श्रोत हो । बर्षैभरी फल दिने केही मात्र फलहरु मध्ये मेव
अलमण्ड (Almond) खेती
• परिचय नेपाली समाजले अलमण्डलाई सामान्यतया मधेसी बदामको नामले चिन्दछ। यसलाई चिनिया बदाम पनि भन्ने गरिन्छ। मधेसी बदाम मध्यम खालको रुखमा फल्ने फल हो । मधेसी बदाम चेरी, आरु, आरुबखडा, खुर्पानीजस्ता बनस्पतिजस्तै फलजन्य बनस्पति हो। तर चेरी, आरु, आरुब
बहुउपयोगी वनस्पति पाउलोनिया
पाउलोनिया वनस्पति नेपालको प्राकृतिक जैविक क्षेत्रमा पाइने रैथाने वनस्पति होइन । यसको रैथान क्षेत्र अर्थात् उत्पति स्थल हाम्रै उत्तरी छिमेकी देश चीनलाई मानिन्छ । करिब ६०–७० फिटसम्मको सुरिलो रुख र छरितो फेद, टुप्पामा लामा लामा हाँगामा दुई
टर्किपालन परिचयः मासुको लागि टर्किपालन व्यवसाय निजी स्तरमा सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सकिन्छ । टर्किको वैज्ञानिक नाउँ मेलिग्रीस ग्यालोपाभा हो । टर्किलाई गरम तथा ठण्डा हावापानीमा पनि पाल्न सकिन्छ । टर्किलाई प्रायः मासुको लागि पालिन्छ तर यिनीहरू ढिल
लोकल कुखुरा पालन र यसका समस्याहरु
नेपालका अधिकांश मानिसहरुको जिविकोपार्जनको लागि मुख्य पेशा कृषि र पशुपालन रहंदै आएको छ । यस्मा पनि विशेष गरी ग्रामिण भुभागमा वस्ने मानिसहरुले परापूर्वकाल देखि नै कुखुरा पाल्दै आईरहेको देखिन्छ । हालको अवस्थामा खास गरी हाम्रो गाउंघरका डण् प्रतिशत
कृषकसँग व्यापारीले खरिद गर्ने अाजकाे तरकारी भाउ :
IFA Krishi द्वारा संकलित
2073/08/11 =================================================घोराहीमा आज तरकारीभाउ प्रतिकेजी बन्दा २३ बरेला ३५ काउली २५ घिउसिमि ५५ करेला ६५भान्टा ३५ लौका २०मुला २० परबर ७८ राताेआलु २६गोलभेडा २५|||||||||||==============================================
मेहनत-पसिनाको करोडौं अलपत्र
भीम चापागाईं/राजु अधिकारी/सिद्धराज राई/ Nagarik News
इलाम/झापा/धनकुटा- ५ सय र हजार दरका भारतीय नोट नचल्दा मेहनत र पसिना बगाएर आर्जन गरेको करोडौं रुपैयाँ पूर्वी नेपालमा अलपत्र परेको छ। व्यापार र मजदुरी गरेर जोहो गरेको भारु नोट एक्कासि चल्न छाडेपछि सयौं व्यापारी र हजारौं सर्वसाधारण अन्योलमा छन्।&nbs
काठमाडौं- कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारी तयारीको विभिन्न दल सम्बद्ध किसानका पेसागत संघ–संस्थाले विरोध गरेका छन्। कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ल्याउने सरकारको योजना २० वर्षे दीर्घकालनि कृषि विकास रणनीति विपरीत भएको उनीहरुको ठहर